Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Sainzi?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Uzbek Valencian Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Sainzi?
Tinoremekedza kufambira mberi kuti kuita nyaya dzesainzi uye tinobvuma zvinenge zvawanikwa mutsvakurudzo dzesainzi kana zviine uchapupu.
“Sainzi kudzidza zvinhu zvakatipoteredza uye maitiro azvo towana ruzivo kubva mazviri.” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary) Kunyange zvazvo Bhaibheri risiri bhuku resainzi, rinokurudzira vanhu kuti vadzidze nezvezvakavapoteredza uye vabatsirwe nezvinenge zvawanikwa nevanhu vanenge vatsvakurudza. Funga nezvemienzaniso inotevera:
Nyeredzi nemapuraneti: “Tarirai kumusoro muone. Ndiani akasika zvinhu izvi? Ndiye anobudisa uto razvo maererano nokuwanda kwazvo, anozvishevedza zvose nemazita azvo. Nokuda kwoukuru hwesimba rake guru, zvaainewo simba guru, hapana kana chimwe chete chazvo chinoshayikwa.”—Isaya 40:26.
Mhuka nemiti: Soromoni “aitaura nezvemiti, kubvira kumusidhari uri muRebhanoni kusvikira kumuhisopi unomera parusvingo; uye aitaura nezvemhuka, nezvezvisikwa zvinobhururuka, nezvezvinhu zvinofamba uye nezvehove.”—1 Madzimambo 4:33.
Zvekurapa: “Vakagwinya havadi chiremba, asi vaya vanorwara vanomuda.”—Ruka 5:31.
Mamiriro ekunze: ‘Wakambopinda mumatura echando here, kana kuona matura echimvuramabwe? Iri kupi nzira inopararira mhepo yekumabvazuva panyika?’​—Jobho 38:22-24.
Mabhuku edu anokurudzira vanhu kuremekedza tsvakurudzo dzesainzi nekuti anobudisa nyaya dzinotaura nezvezvinhu zvakatipoteredza uye nezvekufambira mberi kuri kuita sainzi. Vabereki vari musangano reZvapupu zvaJehovha vanoendesa vana vavo kuchikoro kuti vadzidze kuitira kuti vanzwisise zvinhu zvakasiyana-siyana zviri panyika. Kunotova neZvapupu zvaJehovha zvakawanda zvinoshanda mumapazi akasiyana-siyana esainzi akadai sebiochemistry, masvomhu, nephysics.
Hatibvumi kuti sainzi inopindura mibvunzo yese yevanhu. * Semuenzaniso, kune mascientists anoongorora kuti nyika yakagadzirwa nei, uye vamwe vachiongorora kuti muviri wemunhu unoshanda sei. Asi mubvunzo ndewekuti nei nyika yakanyatsogadzirwa zvekuti zvinhu zvinokwanisa kurarama zvakanaka, uye nei nhengo dzemuviri dzichinyatsoshanda pamwe chete zvakanaka?
Takasvika pakuona kuti Bhaibheri rega ndiro rine mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo iyi. (Pisarema 139:13-16; Isaya 45:18) Saka tinotenda kuti dzidzo yakanaka inosanganisirawo zvese, kudzidza sainzi uye Bhaibheri.
Dzimwe nguva, sainzi inomboita seinopesana neBhaibheri. Pamwe pacho zvinokonzerwawo nekuti vanhu vanenge vasinganzwisisi zvinenge zvichitaurwa neBhaibheri. Semuenzaniso, Bhaibheri haridzidzisi kuti nyika yakasikwa mumazuva 6 emaawa 24.​—Genesisi 1:1; 2:4.
Dzimwe tsvakurudzo dzesainzi dzinoonekwa sekuti ndedzechokwadi, dzinenge dzisina uchapupu hwakakwana uye dzinorambwa nemamwe mascientist anoremekedzwa. Semuenzaniso, sezvo nyika yakatipoteredza iine zvinhu zvinoshamisa, tinobvumirana nemascientist nevamwewo vakawanda vakaona kuti zvinhu zvipenyu hazvina kuvapo neevolution.
^ ndima 10 Erwin Schrödinger, inyanzvi yephysics uye akambohwina Nobel Prize. Akanyora kuti sainzi “haina zvainotaura nezvezvinhu chaizvo zvatinoda kunyatsoziva uye zvinokosha kwatiri.” Albert Einstein akambotiwo: “Takadzidza nenzira yakaoma kuti mafungiro atinoita haagadzirise matambudziko eupenyu hwedu.”